Mp: Wetterstrand iyo Eriksson oo Kulanka ka Hadlay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mp: Wetterstrand iyo Eriksson oo Kulanka ka Hadlay
Uppdaterat fredag 20 maj 2011 kl 15.50
Publicerat fredag 20 maj 2011 kl 14.59
Gelinkii hore ee maanta oo ey ka hadleen goobtii kulan-sannadeedka ee xubnaha xisbiga Doogu uga socda magaalada Karlstad ayey qudbadahoodii ugu dambeeyey ka soo jeediyeen labada hogaamiye ee jagada banneeyn doona Maria Wetterstrand iyo Peter Eriksson.
Wetterstrand iyo Eriksson ayaa jagadaa hayay laga soo bilaabo sannadkii 2002 iyadoona sida uu qorayo xeerka xisbigoodu yahay iney baneeyaan maadaama ey u dhammaatay sagaalkii sannadood ee la ogolaa.
Berito oo sabtiyana la dooran doono ciddii jagooyinkaa qaban lahaa. Sacab iyo sawaxan ayaa lagu soo dhoweeyey labada hogaamiye kolkii ey u soo istaageen iney qudbaddoodii ugu dambeeysey halkaa ka jeediyaan.
Marie Wetterstrand ayaa hadalkeedii ku sheegtay in cashuurta gawaarida ee faras-magaalaha Istockholm iyo isku duubnaantii xisbiga uu meesha uga soo wada jeestay sharcigii ilaalinta isgaarsiinta ee FRA, iney yihiin labada arrimmood oo iskula qab wayn tahay muddadii ay jagadan haysay.
Iyo sidoo kale go’aankii cafiska guud ee soo galootiga, xisbigeeduna ahaa midkii horboodka u ahaa.
- Hir-gelintii aan xeerkaa hirgelinay ayuu suurtagal u siiyey kummanaan ruux iney dalka ku helaan deggenaansho joogto ah, kuwaasina oo horey ugu jiray xaalad mustaqbal aan cayineeyn.
Peter Eriksson, ayaa isaguna sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu jagada ugu sarreeysa howlaha kaga tago.
- Waxaa ii suurtagashay inaan goolkii gaaro. Waana sagaal sannadood oo aan ka mid ahaa labada hogaamiye ee xisbiga Doogga. Waana mid aan inta badan sidaa u dhicin in iyada oo xaalad wanaagsan lagu jiro uu madaxa hoggaanka xisbigu jagada ka dego. Waa nasiib ayaa la oran karaa.